Soo dejisan WonderFox Photo Watermark 8.3 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaTifatiraha sawiradaWonderFox Photo Watermark
Bogga rasmiga ah: WonderFox Photo Watermark
WonderFox Photo Watermark – waa software si looga hortago sawir qaadidda adoo ku daraya aaladda. Software wuxuu awood u leeyahay inuu ku daro qoraallada qoraalka ah ee foomka magacaaga ama calaamadda shirkadda oo aad dooratid xarfaha saxda ah, hooska ama saameynta. WonderFox Photo Watermark waxay ku dari kartaa sawirada suugada sawirada laga soo xuli karo shaybaarka la soo jeediyey ama ku xiran adiga. Barnaamijkani wuxuu taageersan yahay soo saarka qashin-qubka, kaas oo aad ugu mahadcelineysid fiyuusta sawirada mar. WonderFox Photo Watermark waxay taageertaa qaababka muuqaalka ugu badan waxayna samayn kartaa hawlaha sawir-celinta caadiga ah sida magaca, beeraha, ama dib-u-dajinta.
Ku daraan filimyada qoraallada
Ku daraan filimyada sawirrada
Gundhig far waaweyn, calaamado iyo saameyn
Wajirinta qashinka ah
Waxay taageertaa qaababka muuqaalka sawirrada
Soo dejisan WonderFox Photo Watermark
Faallo ku saabsan WonderFox Photo Watermark
WonderFox Photo Watermark Xirfadaha la xiriira
Tani waa buug xasuus qor ah oo qora qoraallo, hawlo muhiim ah ama dhacdooyin. Barnaamijka waxaa ku jira qalab awood badan oo xusuusinaya qoraallada waqti go’an.